Mini Screen Recorder, safidy iray amin'ny QuickTime rehefa manoratra ny efijery an'ny Mac | Avy amin'ny mac aho
Nandritra ny roa taona, ny fampiharana QuickTime dia miankina amin'ny tanindrazana mamela antsika handrakitra ny efijery an'ny Mac tsy mila mampiasa rindranasa avy amin'ny antoko fahatelo, izay manamora tokoa ny asa rehefa manao tutorial, mirakitra ny lalao na zavatra hafa ilainay amin'ity lafiny ity.
Saingy ao amin'ny Mac App Store dia afaka mahita fampiharana be dia be isika izay mamela antsika hanao izany, ary koa ivelan'ny azy, satria tato anatin'ny taona vitsivitsy dia ny isan'ny fampiharana izay nisafidy ny hiala ny Mac App Store nitombo be. Saingy resaka hafa io.
Mini Screen Recorder dia iray amin'ireo rindranasa hitantsika ao amin'ny Mac App Store izay ahafahantsika manoratra ny efijery an'ny Mac anay hizara azy io, mampakatra azy amin'ny YouTube, manitsy azy ... Ity fampiharana ity dia mety sy mety tsara ho an'ny Raketo haingana ny efijery iray manontolo, ny ampahany amin'ilay efijery, na ny varavarankely fampiharana fotsiny, hany ka ny sain'ny olona ihany no ifantohana ny sain'ny olona, ​​mety indrindra raha ny safidy natolotry ny fampiharana izay tadiavinay dia tsy zaraina madiodio amin'ny efijery.
Mini Scrreen Recorder Endri-javatra lehibe
Alao izay rehetra aseho eo amin'ny efijery, amin'ny varavarankely na amin'ny ampahany amin'ilay efijery izay noferanay teo aloha.
Ny fanapaha-kevitra farany ambony mamela antsika hanoratra dia 2.880 x 1.800, ka mifanaraka amin'ny fanapahan-kevitra marobe, na dia tsy tokony hanara-maso aza ny vahaolana 4k sy 5k, izay hanery antsika hampiasa QuickTime raha izany no tranga misy antsika.
Ny firaketana dia namboarina tamin'ny isan'ny FPS ka ny horonan-tsary dia haneho antsika fluidity tena avo.
Io dia ahafahantsika mirakitra feo mivantana avy amin'ny solosainantsika na amin'ny alàlan'ny mikrô ivelany na ilay tafiditra ao anaty fitaovana.
Mini Screen Recorder dia misy ao amin'ny Mac App Store amin'ny vidiny 1,99 euro ary azontsika atao ny misintona azy amin'ny alàlan'ity rohy manaraka ity.
Mini Screen Recorder€ 2,99
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Programa Mac » Mini Screen Recorder, safidy iray amin'ny QuickTime rehefa manoratra ny efijery an'ny Mac
Ahoana ny fomba hikirakira ireo safidy hangataka ny tenimiafinao iTunes amin'ny Apple TV